Ukwamukelwa Komsebenzisi Kwe-Geosocial and Location-based | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 11, 2011 NgoLwesihlanu, Novemba 11, 2011 Douglas Karr
Ezinye izibalo ezinhle ngokumukelwa kwe-Geosocial and Location-Based Services (LBS) ngamadivayisi eselula ziveziwe kulo mbhalo ovela ku IFlowtown - Isicelo Sokumaketha Komphakathi. Ngaphezulu I-58% yabasebenzisi be-smartphone basebenzisa lezi zinsizakalo. I-infographic ichaza insizakalo ngayinye njenge:
Izingosi zeGeosocial - lolu hlobo lokuxhumana nabantu lisebenzisa izinsizakalo kanye namakhono, njenge-geocoding kanye ne-geotagging, ukunika amandla ukuguquguquka okungeziwe komphakathi.
Izinsizakalo Zendawo - lolu hlobo lolwazi noma insizakalo yokuzijabulisa isebenzisa ukuma kwendawo yedivayisi yeselula ngenethiwekhi.
Tags: i-geosociallbsamasevisi asuselwa endaweniindawo-basedUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiumakhala ekhukhwinismartphone
Ukuthengwa Kweholide ku-inthanethi